Kajikaky politika ny fanoloana minisitra : hatao filohan’ny Antenimierandoholona Rakotovao Rivo? | NewsMada
Kajikaky politika ny fanoloana minisitra : hatao filohan’ny Antenimierandoholona Rakotovao Rivo?
Mitohy ny kitsapatsapa sy ny kajikajy politikan’ny mpitondra. Izay hatrany no tena zava-dehibe sy mahamaika? Nesorina tamin’ny toerany ny minisitra ao amin’ny fiadidiana ny Repoblika miandraikitra ny Fambolena sy ny fiompiana, Rakotovao Rivo, araka ny didim-panjakana, ny 12 oktobra lasa teo, izay novakin’ny sekretera jeneralin’ny fiadidiana ny Repoblika teny Iavoloha, omaly.
Notendrena ho loholona, hisolo toerana ny loholona teo aloha Ahmad, io filohan’ny antokom-pitondrana HVM io. Haingana be ny fanendrena ary amin’ny fotoam-pisokafan’ny fivorian’ny Antenimierandoholona… Banga efa tamin’ny marsa anefa io toerana iray tetsy Anosikely io… Fanapahan-kevitra sy kajikajy politika? Hatramin’izao koa tsy mbola misy minisitra misahana ny Atitany fa bodoin’ny praiminisitra… Kajikajy hiatrehana fifidianana avokoa izany ? Efa resaka tamin’ny haino aman-jery sasany talohaloha teo ny amin’ny tsy fahatokisan’ny filohan’ny Repoblika ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré, nilaza ho ratsirakista. Tsy nijerena lavitra ny nifidianan’ny HVM azy ho filoha?
Nisy ny fitsapatsapana ny hevitra amin’ny fanitsiana ny lalàmpanorenana? Teo ny resabe momba ny And. 46 amin’ny lalàmpanorenana ny amin’ny fametraham-pialan’ny filoha am-perinasa roa volana mialoha ny fifidianana, raha hirotsa-kofidina izy. Tsy azo ihodivirana.
Nambara ny hoe tsy olana ny And. 46, fa ny And. 47 momba ny fanatanterahana fifidianana filoha 30 andro farafahakeliny ary 60 andro farafahabetsany, alohan’ny fiafaran’ny fe-potoam-piasan’ny filoha am-perinasa. Tsy misy manaiky fanitsiana lalàmpanorenana, afa-tsy ny mpitondra sy ny mpomba azy. Efa naneho ny heviny ny mpahay lalàna, mpanao politika, firaisamonina sivily, na ny sehatra iraisam-pirenena aza.
Eo hatrany ny tahotra fanonganam-panjakana
Tsy azo ihodivirana koa ny fandavan’ny “besinimaro”? Na tsy afa-manoatra ka misoroka mialoha izay mety ho fanonganam-panjakana na ny tahotra tsy ho tafaverina eo amin’ny fitondrana, raha mametra-pialana eo. Izay ny kajikajy hanendrena ny filohan’ny HVM ho loholona? Ho filohan’ny Antenimierandoholona… Tsy hanahirana izany fa maro anisa izy ireo, afa-manao izay tiany hatao.
Handeha ho azy izany amin’ny Fitsarana avo amin’ny lalàmpanorenana (HCC) akaiky ny fahefana mpanatanteraka hatramin’izay, fa tsy misy izay fisaraham-pahefana. Mbola fanamafisam-pahefana ialokalofana amin’ny hoe fahamarinan-toerana sy fitoniana politika hatrany no zava-dehibe mahamaika, fa tsy izay ady amin’ny pesta, tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, ady tany… ?